1 Samuel 10 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
10 Samuel wee were karama+ mmanụ wụọ ya n’isi ma susuo ya ọnụ,+ sị: “Nke a ọ́ bụghị n’ihi na Jehova etewo gị mmanụ ịbụ onye ndú+ nke ihe nketa ya?+ 2 Mgbe i si ebe m nọ pụwa taa, ị ga-ahụ ndị ikom abụọ n’akụkụ ili Rechel+ nke dị n’ókèala Benjamin, na Zelza, ha ga-asị gị, ‘A chọtawo nne ịnyịnya ibu ndị ahụ ị gara ịchọ, ma ugbu a, nna gị ahapụwo ihe gbasara nne ịnyịnya ibu+ ndị ahụ chegbuwezie onwe ya banyere unu, sị: “Gịnị ka m ga-eme banyere nwa m nwoke?”’+ 3 Ị ga-agaferekwa ebe ahụ gakwuo ihu wee bịaruo n’osisi ukwu dị na Tebọ, n’ebe ahụkwa ka ndị ikom atọ ndị na-agakwuru ezi Chineke na Betel+ ga-ezute gị, otu ga-achị ụmụ ewu atọ,+ otu ga-eji ogbe achịcha atọ,+ otu ga-ebukwa nnukwu ite mmanya.+ 4 Ha ga-ajụkwa gị otú i mere+ ma nye gị ogbe achịcha abụọ, nara ha ogbe achịcha ndị ahụ. 5 E mesịa, ị ga-abịa n’ugwu nke ezi Chineke,+ n’ebe ndị agha Filistia na-anọ eche nche.+ Ọ ga-erukwa na mgbe i ruru n’ebe ahụ, n’obodo ahụ, ị ga-ezute ìgwè ndị amụma+ ka ha si n’ebe dị elu+ na-agbadata, ndị ji ụbọ akwara+ na obere ịgbà+ na ọjà+ na une+ ga-anọkwa ha n’ihu, ka ha na-ekwu okwu dị ka ndị amụma. 6 Mmụọ+ Jehova ga-amalite ịkpa ike n’ahụ́ gị, ị ga-ekwukwa okwu dị ka onye amụma,+ gị na ha, a ga-eme ka ị gbanwee ghọọ onye dị iche. 7 Ọ ga-erukwa na mgbe ihe ịrịba ama+ ndị a mezuuru gị, mee ihe i nwere ike ime,+ n’ihi na ezi Chineke nọnyeere gị.+ 8 Buru m ụzọ gbadaruo Gilgal;+ lee! m ga-agbadakwute gị ka m chụọ àjà nsure ọkụ, chụọkwa àjà udo.+ Ị ga-echere m ruo ụbọchị asaa,+ ruo mgbe m ga-abịakwute gị, m ga-emekwa ka ị mara ihe ị ga-eme.” 9 O wee ruo na ozugbo ọ hapụrụ Samuel pụwa, Chineke malitere ime ka obi ya gbanwee;+ ihe ịrịba ama a niile+ wee malite imezu n’ụbọchị ahụ. 10 Ha wee pụọ n’ebe ahụ gaa n’ugwu, ma, lee, ìgwè ndị amụma bịara izute ya; ozugbo ahụ, mmụọ Chineke malitere ịkpa ike n’ahụ́ ya,+ o wee malite ikwu okwu dị ka onye amụma+ n’etiti ha. 11 O wee ruo na mgbe ndị niile mabu ya hụrụ ya, lee! o so ndị amụma na-ebu amụma. Ndị ahụ wee gwa ibe ha, sị: “Gịnị bụ ihe a na-eme nwa Kish? Sọl ò sokwu ná ndị amụma?”+ 12 Otu nwoke nọ n’ebe ahụ wee zaa, sị: “Ma ònye bụ nna ha?” Ọ bụ ya mere e ji atụ ilu,+ sị: “Sọl ò sokwu ná ndị amụma?” 13 N’ikpeazụ, ọ kwụsịrị ikwu okwu dị ka onye amụma wee bịa n’ebe dị elu. 14 E mesịa, nwanne nna Sọl jụrụ ya na onye na-ejere ya ozi, sị: “Ebee ka unu gara?” O wee zaa, sị: “Anyị gara ịchọ nne ịnyịnya ibu anyị,+ anyị nọ na-achọgharị ha, ma ha anọghị n’ebe ahụ. Anyị wee bịakwute Samuel.” 15 Nwanne nna Sọl wee sị: “Biko, gwa m, Gịnị ka Samuel gwara unu?” 16 Sọl wee sị nwanne nna ya: “Ọ gwara anyị kpọmkwem na a chọtawo nne ịnyịnya ibu ndị ahụ.” Ma ọ gwaghị ya banyere ọbụbụeze nke Samuel kwuru okwu ya.+ 17 Samuel wee kpọkọta ndị Izrel ka ha bịa n’ihu Jehova na Mizpa,+ 18 o wee sị ha: “Nke a bụ ihe Jehova bụ́ Chineke Izrel kwuru,+ ‘Ọ bụ m kpọpụtara Izrel n’Ijipt, ọ bụkwa m napụtara unu n’aka Ijipt+ nakwa n’aka alaeze niile nọ na-akpagbu unu.+ 19 Ma unu onwe unu—taa ka unu jụrụ Chineke+ unu bụ́ onye zọpụtara unu n’ihe ọjọọ unu niile nakwa n’ahụhụ unu, unu wee sị: “Ee e, kama ọ bụ eze ka ị ga-eme ka ọ chịwa anyị.” Ugbu a, guzonụ n’ihu Jehova n’ebo n’ebo+ nakwa n’ìgwè dị otu puku mmadụ otu puku mmadụ.’” 20 Samuel wee mee ka ebo niile nke Izrel bịa nso,+ e wee họrọ ebo Benjamin.+ 21 O wee mee ka ebo Benjamin bịa nso n’ezinụlọ n’ezinụlọ, e wee họrọ ezinụlọ ụmụ Mata.+ N’ikpeazụ, a họọrọ Sọl nwa Kish.+ Ha wee chọwa ya, ma a hụghị ya. 22 N’ihi ya, ha jụrụ+ Jehova ọzọ, sị: “Nwoke ahụ ọ̀ bịarutewo ebe a?” Jehova wee sị: “Lee ya, o zoro+ n’etiti ibu.” 23 Ha wee jiri ọsọ gaa kpọpụta ya n’ebe ahụ. Mgbe o guzoro n’etiti ụmụ Izrel, o toro ogologo karịa ndị ọzọ niile site n’ubu ya gbagoo.+ 24 Samuel wee gwa ụmụ Izrel niile, sị: “Ùnu ahụwo onye Jehova họọrọ,+ na ọ dịghị onye dị ka ya n’etiti mmadụ niile?” Mmadụ niile wee malite iti mkpu, sị: “Eze, ị ga-adị ndụ!”+ 25 Samuel wee gwa ụmụ Izrel ihe ruuru eze,+ deekwa ya n’akwụkwọ ma debe ya n’ihu Jehova. Samuel wee hapụ ụmụ Izrel niile ka ha lawa, onye ọ bụla n’ụlọ ya. 26 Ma Sọl lara n’ụlọ ya dị na Gibia,+ ndị dike bụ́ ndị Chineke metụrụ aka n’obi wee soro ya.+ 27 Ma ndị ikom na-abaghị n’ihe+ sịrị: “Olee otú onye a ga-esi zọpụta anyị?”+ Ha wee leda ya anya,+ ha ewetaghịkwara ya onyinye ọ bụla.+ Ma ọ gbachiri nnọọ nkịtị.+